Erling Haaland Oo Rikoodh Cusub Dhigay & Borussia Dortmund Oo U Soo Gudubtay Wareega 8da Champions League | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaErling Haaland Oo Rikoodh Cusub Dhigay & Borussia Dortmund Oo U Soo Gudubtay Wareega 8da Champions League
Erling Haaland Oo Rikoodh Cusub Dhigay & Borussia Dortmund Oo U Soo Gudubtay Wareega 8da Champions League
Kooxda Borussia Dortmund ayaa si ciriir ah ugu soo baxday wareega sideed dhamaadka Champions League ka dib markii ay barbaro 2-2 kala kulmeen kooxda Sevilla lugtii labaad ee wareega 16ka iyagoo wadar ahaan ku soo baxay 5-4.
Erling Haaland ayaa labada gool u saxiixay kooxda Borussia Dortmund oo mid ka mid ah ay aheyd rigoore iyadoo VAR ay la wareegtay diirada ciyaarta qeybtii labaad.
Haaland ayaa hogaanka u dhiibtay Dortmund qeybtii hore ka dib kubad uu ka helay Marco Reus laakiin goolkiisii labaad ayaa ku dhashay si la yaab leh. Markii hore isaga ayaa dhaliyay gool qurux badan laakiin goolka waxaa diiday VAR oo dhigtay rigoore.
Rigoorada waxaa u soo istaagay isla Haaland laakiin wuu qasaariyay rigoorada. VAR ayaa amartay in dib loo tuuro rigoorada iyadoo markaas ka dib uu goolka saxiixay xiddiga reer Norway.
Goolasha uu dhaliyay caawa ayuu ku dhigay rikoodh cusub isagoo noqday xiddigii ugu da’da yaraa abid ee 20 gool ka dhaliya Champions League.
Sidoo kale waa xiddiga kulamada ugu yar ku gaaray 20 gool, isagoo goolashaan ku dhaliyay kaliya 14 kulan. Xiddiga ku soo xiga ee waa Harry Kane oo 24 kulan ay ku qaadatay inuu 20 gool ka dhaliyo Champions League.
Haaland ayaa sidoo kale noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ugu yaraan labo gool dhaliya afar kulan oo isku xigta Champions League.
Sevilla ayaa gool soo ceshatay markii uu rigoore u saxiixay Youssef En-Nesyri, isla xiddigaan ayaa gool labaad u saxiixay waqtigii dhimashada ciyaarta iyadoo Sevilla ay u baahneyd gool kale si waqti dheeri ah la iska aado laakiin taasi ma aysan dhicin.
Waxaa natiijo wadareed 5-4 ku soo baxday kooxda Borussia Dortmund.